တရုတ်နိုင်ငံရှိ ရေကြီးမှုများ- ပျက်စီးမှုနှင့် မဟာဗျူဟာ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 13/01/2022 10:00 | ရေကြီးမှု
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များသည် အကြိမ်ရေနှင့် ပြင်းထန်မှု ပိုများလာသည်။ ဟိ တရုတ်မှာ ရေကြီးတယ်။ သိသိသာသာ တိုးလာတယ်။ ၎င်းတို့သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း စီးပွားရေး ပျက်စီးမှုများ အများအပြား ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူအများအပြား သေဆုံးစေခဲ့သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ တရုတ်နိုင်ငံက ဒီသေစေနိုင်လောက်တဲ့ ရေကြီးမှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ ဗျူဟာအချို့ကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရေကြီးမှု၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဗျူဟာများအကြောင်း သိလိုသမျှကို ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြသွားပါမည်။
1 တရုတ်ပြည်မှာ ရေကြီးတယ်။
2 တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရေကြီးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ဗျူဟာများ
မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြို့ပြအသွင်ဆောင်မှု အံ့ဩဖွယ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၎င်း၏ထူးခြားသော ဘူမိဗေဒနှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အသွင်အပြင်များနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ မြို့ပြရေလွှမ်းမိုးမှုတွင် လူသန်းပေါင်းများစွာကို သေစေတတ်သော ရောနှောမှုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ရာနှင့်ချီသော သေဆုံးမှုများနှင့် စီးပွားရေး ဆုံးရှုံးမှုများ ကြီးမားသည်။ ရေကြီးရေလျှံမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အစီအမံများစွာ ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲ၊ သူတို့ရဲ့ ရလဒ်တွေက ဘာတွေလဲ။ နောက်မှတ်စုတွင်။
1949 ကတည်းက မုန်တိုင်းများ၊ တိုင်ဖွန်းများ သို့မဟုတ် ဒီရေများကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နယ်မြေအသီးသီးတွင် ရေကြီးရေလျှံမှု ၅၀ ကျော်၊. အဆိုပါဖြစ်ရပ်များကြောင့် အစိုးရသည် ရေကြီးမှုနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြား ဆက်နွှယ်မှုဖြစ်စဉ်တွင် လူသားနှင့် ပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် တားဆီးရေးအစီအစဥ်များ ချမှတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ရေကြီးခြင်းဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် သမိုင်းသည် စေတနာကောင်းပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 1931 ခုနှစ်တွင် Wuhan တွင်ရက်ပေါင်း 100 ကျော်ရေလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီးလူပေါင်း 780 ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး 000 သေဆုံးခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ကပ်ဘေးတစ်ခုအဖြစ် 32 ခုနှစ်တွင် Han မြစ်ဝှမ်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း 600 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး Ankang မြို့ကိုရေမြုပ်စေခဲ့သည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် ၈ မီတာ။
2000 ခုနှစ်ကတည်းက တရုတ်နိုင်ငံသည် ရေကြီးရေလျှံမှုကြီးများကို အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် နန်ကျင်းတွင် မကြုံစဖူး မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ချီလီအလယ်ပိုင်းတွင် နှစ်စဉ်မိုးရွာသွန်းမှုထက် နှစ်ဆနီးပါး မိုးရေချိန် 2003 မီလီမီတာအထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရာနှင့်ချီ၍ သေဆုံးခဲ့ရကာ လူပေါင်း 309 သန်းကျော် ရေလွှမ်းမိုးမှုများလည်း ပါဝင်သည်။
ဇူလိုင်လ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ Chongqing နှင့် Jinan တို့သည် နှစ်ပေါင်း 100 အတွင်း အကြီးမားဆုံး မုန်တိုင်းများ ကျရောက်ခဲ့ပြီး၊ လူ ၁၀၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စီချွမ်တွင် လူ ၈ သိန်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး လူ ၁၅၀ သေဆုံးခဲ့သည်။ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ ရေကြီးမှု၏ 103% နီးပါးသည် ကျေးလက်ဒေသများတွင်မဟုတ်ဘဲ မြို့ကြီးများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုအချိန်တွင်၊ မြို့ပြပညာရှင်တို့က မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကို ခံနိုင်ရည်မရှိလောက်အောင် ခေတ်မီသောမြို့များသည် အားကောင်းမှုမရှိကြောင်းနှင့် "အလယ်အလတ်" ကပ်ဘေးသည် မြို့တစ်မြို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအထိ နှောင့်နှေးစေဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရေကြီးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ဗျူဟာများ
မြို့ပြရေလွှမ်းမိုးမှုများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး လူများကို ပိုမိုထိခိုက်နစ်နာစေကာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် သေဆုံးဒဏ်ရာရမှုများသည် မြို့တော်၏ တိုးတက်မှုနှုန်းနှင့် အချိုးကျသောကြောင့် မြို့ပြဖြစ်ထွန်းမှု တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အန္တရာယ်များသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးလာကာ ယင်းကို သည်းခံနိုင်လျှင် ပို၍ပင် စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ဆယ်ဂဏန်း သို့မဟုတ် ရာနှင့်ချီ နေထိုင်သော ဒေသများ၏ လူမှုစီးပွားရေး တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေသည်။
ဤကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်းကို အဆုံးသတ်ရန်အတွက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ ယင်းကိစ္စကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ဗဟိုအစိုးရထံ အဆိုပြုခဲ့ပြီး ထိရောက်မှုမရှိသော ရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒမှ ရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒသို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ယင်းကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုဇုန်အတွင်း ဖြစ်ထွန်းသည့်လုပ်ငန်းများကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဥ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့် ပြည်သူများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို အာမခံချက်ပေးသည့် အစီအမံများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်ရေးမှာ အဓိကတာဝန်ဖြစ်သည့် မြို့ပေါင်း ၆၄၂ မှ ၃၅၅ သည် - ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဗဟိုအစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော ရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်ရေးစံနှုန်းများထက် နိမ့်ကျသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသည် "အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု" သဘောတရားကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး မူဝါဒအသစ်များကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှု လျော့ပါးစေရန် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ အစီအမံများကို မှီခိုအားထားရာမှ တည်ဆောက်ပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံမဟုတ်သော အစီအမံများ ဟန်ချက်ညီစေရန် ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနသည် အမျိုးသားရေကြီးရေလျှံမှု စီမံခန့်ခွဲရေး မဟာဗျူဟာကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။
“China Flood Control Strategy” ဟုခေါ်သော ရိုးရှင်းစွာဖော်ပြနိုင်သည်- တရုတ်အစိုးရသည် စွန့်စားရမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်ရေးကို ဆုံးဖြတ်သည်၊ အထူးသဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ နည်းပညာနှင့် ပညာရေး (ဥပမာ- ဗဟိုဦးစီးစနစ်၊ ကာကွယ်ရေးစနစ်၊ ကာကွယ်ရေး၊ systems, ဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးအစီအမံများနှင့်ရေကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးအာမခံ) နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်လွယ်ကူချောမွေ့စေကဲ့သို့သောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအစီအမံများအကောင်အထည်ဖော်ရန်အစီအစဉ်များ၊ ရေကာတာများ အားကောင်းစေခြင်း၊ မြစ်ရေမျက်နှာပြင် ထိန်းညှိခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း။အပြည့်အဝနှင့် ရေရှည်အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိစေရန်။
ရေကြီးရေလျှံမှု စီမံခန့်ခွဲမှု၏ ဗျူဟာသုံးရပ်မှာ-
ဘေးအန္တရာယ်များကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ရန် ရေထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို တည်ဆောက်ပါ။ အလွန်ကြီးမားသော Three Gorges Dam စီမံကိန်းသည် ဤစီမံကိန်းတွင် ထင်ရှားသည်။
ဖြစ်ထွန်းသော ကဏ္ဍတွင် ရေလွှမ်းမိုးမှု လျော့ပါးစေရန် လူသားများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ထိန်းချုပ်ပါ။
ရေကြီးရေလျှံမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အသုံးချပြီး ကျန်ရေအရင်းအမြစ်များကို အသုံးချပါ။.
ဤအစီအစဥ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် တရုတ်အစိုးရသည် လုံလောက်သောရန်ပုံငွေနှင့် ဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးစေရန်အတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှု၏ အဓိကအချက်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ လျင်မြန်သောမြို့ပြအသွင်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေရှားပါးမှုကိုဖြေရှင်းရန် မလွှဲမရှောင်သာမြို့ပြရေကြီးမှုကို အသုံးပြုခြင်းသည် ရေကြီးမှုနှင့် ၎င်းတို့၏အပျက်သဘောဆောင်သည့်သက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းရုံသာမက အဆိုပါစစ်မှန်သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှ အမြတ်အစွန်းကိုရှာဖွေရန် တရုတ်၏မဟာဗျူဟာ၏စံနမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆီနိတ်တာ Alejandro Navarro မှ ပြောကြားရာတွင် ချီလီသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စံနမူနာကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး ဆည်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအပြင် လူဦးရေကို ပညာပေးခြင်း၊ လျော့ပါးသက်သာစေရေး အစီအစဥ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် သဘာဝ၏စွမ်းအားကို အပြည့်အဝမျှော်လင့်ထားရမည်ဟု နားလည်ထားကြောင်း၊ အတိုင်းအတာများ။ »
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က “ဒီမှာ ရေကြီးမယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားဘူး၊ ဒါက သက်သေအထောက်အထားတွေ အများကြီးရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်က Papen တူးမြောင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလိုမျိုး၊ ရေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။. မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် မြောင်းများ ရေလျှံကာ လူသေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ရာနဲ့ချီတဲ့လူတွေကို အရင်ဆုံး နိုင်ငံတော်က မိသားစုတွေကို လျော်ကြေးပေးပြီးမှ ဒီလို ကံဆိုးမှုမျိုး ထပ်မဖြစ်အောင် ဗျူဟာတွေ ချရမယ်” ​​ဟု ၎င်းက နိဂုံးချုပ်သည်။
ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့အတူ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရေကြီးမှုတွေအကြောင်း ပိုလေ့လာနိုင်ပြီး အဲဒါတွေကို သဘောကျမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » ရေကြီးမှု » တရုတ်ပြည်မှာ ရေကြီးတယ်။